मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने युवतीहरु यौन रोगबारे अनिबिज्ञ| Nepal Pati
काठमाडाै‌ । काठमाडाै‌ नयाँ बसपार्कमा भेटिइन नाम परिवर्तन रितु चौधरी । कालो कछाड र माथि पातलो टिसर्ट लगाएकी उनी बसपार्ककाे एक गेस्ट हाउसमा वेटरको काम गर्छिन् । शुरुमा केही बोल्न नचाहेकी उनले धेरै कहर गरेपछि हामि सँग बोल्न चाहिन ।
‘यो गुमनाम र बदनाम जिन्दगीदेखि वाक्क छु – अहिले कसैले विवाह गर्दैन । भविष्य यसैमा जाँदैन, त्यसैले विदेश जान लागेँ, गाउँ जान पनि सक्दिनँ ।’ उनी पहिले ठमेलमा काम गर्थिन् । काठमाडौंमा काम गर्ने भनेर आएकी उनी प्रेमीले एबोर्सन गराएर धोका दिएपछि बाँच्ने सहारामा गेष्ठ हाउसमा काम गर्न थालिन ।
हामिले उनलाई यौन रोगको बारेमा थाहा छ भन्ने जीज्ञासामा थाहा नभएको बताइन् । त्यस्तै उनले यौन रोगको बारेमा जाँच नगराएपनि आफुले असुरक्षीत सम्पर्क नगरेको दावी गरीन् ।
सीमा शर्मा नाम परिवर्तन पनि उनि सँगै बसपार्ककै डान्सबारमा काम गर्छिन । धेरै बेरको उनको नाच पश्चात थाकेहि उनिसँग पनि थोरै कुराकानि भयो । बडो राम्रो नृत्य तपाइको बेजोड लाग्यो भन्दा ‘झ्याप भएर नाचेको हुन्छु थाहै हुन्न ।’ कति गाह्रो छ नाच्न भन्ने प्रश्नमा धेरैन गाह्रो छ । ग्राहकले जस्तो भन्यो त्यस्तै सँगै नाच्न सक्नुपर्छ उनको जवाफ न पैसा छ, न इज्जत । न घर । बिहे गर्ने घरजम गर्ने मन छ कि छैन ? खै को मुर्गा भेटिएला नि माया गर्ने ?’ यौन रोगको बारेमा कतिको सचेत हुनुहुन्छ तपाई ? उनको जवाफ यौनाङ्गहरूमा घाउ, खटिरा, विमिरा आउन थालेको छ । पिसाब पनि पोल्छ । उनको यस्तो जवाफ पाएपछि हामिले उनलाई यौन रोगकै लक्षण देखिएकाले तुरुन्त स्वास्थ्य केन्द्र जानुपर्ने सुझायौं ।
एक हिसाबले गैरकानुनी मानिने यौन धन्दामा पुगेका छन् । रात्रिकालिन मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्नेहरु । पहिलो रात बारमा नाचगान र चिनजानमा जोडिनेहरु विस्तारै यौन साथी बन्छन् । बैधानिक रुपमा श्रीमती कसैले बनाउँदैन । रोहिनि गोले नाम परिवर्तनले भनिन् हामी राम्री रे कान्छी पनि रे तर बुढि नबनाउने लोग्नेका जात ।’ उनी भन्छिन ‘एक पेग ह्वीस्कीका भरमा छाति र नाइटोमुनि हात पु¥याउने अनि भोलिपल्ट त कतै बोलाएर बाँकी नराख्ने ।’ उनी पनि बदनाम जीवन र गुमनाम भविष्यबाट मुक्त हुन विदेशिने तयारीमा छिन् । घरपरिवारलाई यो काम गर्छु भनेकी पनि छैनन् । यौन रोगको बारेमा उनले खुले रै भनिन गुप्ताङ्गमा मुसा आएको छ । यो रोग अर्को व्यक्तिमा रोग सर्छ। मुसा स–सानो गिर्खा जस्तो देखिन्छ।
डान्सबार, क्याबिन, मसाज, दोहोरी साँझ, खुला रेस्टुरेन्ट, डिस्को विस्तारै रेडलाइट एरियामा परिवर्तित हुँदै छन् भन्ने संकेत मिलेको छ । मनोरञ्जन क्षेत्रमा ६० हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको मनोरञ्जन क्षेत्र र गेस्ट हाउसको आँकडा छ । काम गर्नेमा ७५ प्रतिशत महिला छन् । तीमध्ये २५ प्रतिशत यौनकार्यमा पनि लिप्त छन् । क्लिनर, वेटर, क्याप्टेन, मसाजकर्ता पनि यौन बजारका पात्र हुने गरेका छन् ।
रीता आले नाम परिपर्तन नयाँ बसपार्क कै होटलमा काम गर्छिन् । वेटरको काम भने र भनेपनि उनको काम ग्राहाकसँग यौन गतिविधि गर्नु रहेको छ । उनलाई पनि डाक्टर भएको ठाउँमा गएर जचाउन डर र अप्ठेरो लाग्छ उनका अनुसार उनको यौनांगबाट सेतो पानी जस्तो बग्छ । उनलाई पक्कै पनि क्याइमेडिया लागेको हुनसक्छ। यो रोगबाट संक्रमितसँग असुरक्षित सम्पर्क राखेमा रोग सर्छ ।
नितु कार्की नाम परिपर्तन बसपार्कमा काम गर्न थालेको झण्डै ५ बर्ष भएछ । उनलाइ त सुन्दै डरलाग्दो एचआइ भी भएको रहेछ । सुरुमा पोखरामा काम गर्ने उनि त्यहाँ दिक्क भएर काठमाण्डौं आएकी रहेछीन् ।
वेटरकै सेवा दिने युवती कम छन् र यौन बजारको ग्राहक बढ्दो छ । सरकारले काठमाडौंको मनोरञ्जन क्षेत्रलाई बैधानिक बनाउन सकेको छैन् । रोजगारीसँगै लाखौँ संलग्न भएकाले पनि यो विषयमा सोच्नु पर्ने भएको छ । यसरी हेर्दा धेरै युवतिहरुमा असुरक्षित यौन सम्पर्कका माध्यमबाट सर्ने रोग व्याप्त रहेको बिषय सोचनिय छ । अब सरकारले कडा कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ ।